Maalinta Prime Prime iyo Black Friday: maxaa la iibsadaa goorma?
Maalinta Amazon Prime waxay u dhowdahay geeska, laakiin iibka ugu weyn ee sanadka wali waa la sii ballansan yahay Nofeembar. Haddii ay tahay iyo in kale waa inaad sugto illaa Jimcaha Madow si aad u iibsato TV-gaas cusub ama laptop-ka waxay ku xirnaan doontaa waqtiga (miyaad u baahan tahay qalabkaaga hadda) iyo sida xilli kasta oo iibku ula dhaqmayo waxyaabaha aad raadineyso.
Waxaan raadineynay labadoodaba Maalinta Caalamiga ee Amazon iyo Jimcaha Madow sanado hada, sidaa darteed waan ognahay goorta waxyaabaha qaar ay u badan tahay inay kuwa ugu jaban yihiin, laakiin aan u ogolaanno ogow sida ay u fududahay ama u adag tahay in la helo oo lala wareego heshiisyada ugu fiican munaasabad kasta.
Taasi waa sababta aan kuu tusayno dhammaan farqiga u dhexeeya Amazon Prime Day iyo Black Friday, iyo haddii ay tahay inaad sugto illaa Nofeembar iibsashadaas weyn.
Amazon Prime Day vs Black Friday: Waa maxay faraqa?
Amazon Prime Day: dhacdo iibka xagaaga diirada la saarayon Amazon taas oo ay u fududahay in labadaba heshiisyo la helo oo la helo ka hor intaanay dhammaan . Qiimayaashu guud ahaan way hooseeyaan, laakiin tafaariiqleyaal badan oo ku lug leh iyo tartan badan oo ku saabsan waxyaabaha ugu fiican, way adkaan kartaa helitaanka heshiisyada aad u baahan tahay.
Inkasta oo labada iibba ay u muuqdaan kuwo isku aalado iyo aalado isku mid ah, waxaa jira faraqyo dhowr ah oo muhiim ah oo u dhexeeya Amazon Prime Day iyo Black Friday oo saamaynaya tayada heshiisyada iyo haddii aad awoodid inaad gaarto intaysan iibinin.
Maalinta Koowaad waa, iska cad, ugu horreyn dhacdo Amazon ah, taas oo macnaheedu yahay inta badan keydku waxay ka imaan doonaan hal tafaariiqle iyada oo kuwa kale ee ka shaqeynaya inay la tartamaan. Tani m Tani waxay ka dhigan tahay in dalabyada ay ka badan yihiinfududahay in la helo oo la hubiyo qiimaha, iyada oo tiro yar oo tafaariiqleyaal ah oo bixiya dalabyo tartamaya. Aad ayey ufiican tahay hadaadan xiiseyneyn inaad ku sugto $ 5 dheeraad ah Chromebook-gaaga.
Si kastaba ha noqotee, Black Friday waa dhacdo aad u ballaadhan oo ay martigeliyaan dukaamo kala duwan oo leh noocyo badan oo kala duwan. In kasta oo taasi micnaheedu tahay waa inaad tuurtaa shabaq ballaadhan, hubi dukaamo badan, oo waxaad rajeyneysaa in iibintaada flash-ka aan lagu garaacin mid kale daqiiqado gudahood, tafaariiqleyda dhammaantood way tartamayaan midba midka kale (halkii uu ka ahaan lahaa Amazon oo keliya.), Marka waxaynu u jeednaa inaynu aragno qiimayaashu inyar inyar hoos u dhacaan.
Waxaa sidoo kale xusid mudan inaad u baahan doontid la siiyo
si aad uga qayb gasho maalinta Amazon Prime Day. In kasta oo tani aysan caqabad ku ahayn soo galitaanka sida ay umuuqato (Amazon waxay bixinaysaa tijaabooyin bilaash ah sida nacnac markay dhacdadu soo dhawaato), Black Friday way aragtaa qiimayaashu inay hoos u dhacaan dhammaan.
Halkani waa halka Black Friday ay lumiso hogaaminteeda, si kastaba ha noqotee. Waqtiga ugu weyn ee iibinta sanadka, waa tartan aad u xiiso badan. Warbixinteenna, waxaan ku ogaanay in Black Friday iyo Amazon Prime Day ay heshiisyo ku yeelan doonaan waxyaabaha ugu sarreeya sida MacBooks, Ipads, iyo dhagaha dhagaha, laakiin heshiisyada saamiyada ee xaddidan ayaa si dhakhso leh ugu dhammaanaya bisha Nofeembar iibka tooska ahna meel walba wuu ka dhici karaa
Jimcaha Madow ayaa qiimo jaban ku leh noocyo badan i Qeybta miisaaniyadda laakiin Maalinta Koowaad waxay siisaa qiime ka wanaagsan lacagta qaybtaan.
Inbadans noocyada waa weyn sida Samsung iyo LG ayaa ka fiican Black Friday, gaar ahaan soosaarista sanadka cusub oo wali waxoogaa aad ugusoo dhawaaday qiima dhimista Maalinta Prime (inkasta oo tafaariiqleyaal badan oo bixiya heshiisyo tartamaya laga yaabo inay isbadalaan. kani). Maalinta ugu horeysa ee Amazon ayaa ugu fiican moodooyinka sanadkii hore maadaama ay ku jiri karaan khaanadaha bisha Nofeembar. telefishinnada marka la barbar dhigo Black Friday. Xidhmada ugu raqiisan ee sanadkii hore waxay kugu kici lahayd $ 88 bishii Noofambar (bandhig 32in 720p ah oo usha lagu qaado), iyadoo qiimaha ugu hooseeya ee Maalinta Ragga uu yahay $ 149.99 oo ah 32in Toshiba smart TV. Si xiiso leh, si kastaba ha noqotee, ikhtiyaariyada miisaaniyadda ee Maalinta Koowaad waxay dhab ahaantii siisay qiimo wanaagsan lacag, oo leh waxyaabo badan oo casriyeysan iyo barnaamijyo.
Si kastaba ha noqotee, marka aan xirno nDareenkeena ku saabsan bandhigyada 4K, waxaan ku aragnaa qiimo aad u deggan oo deggan
(cutubyadu way ka jaban yihiin, keydkooduna wuu dheer yahay, iyo qiimo dhimisyada waaweyni qayb kama aha iibka degdegga ah). Telefishanka 43-inji ah ee Hisense 4K wuxuu qiimihiisu yahay $ 219,99 kaliya marka loo barbar dhigo Maalinta Maalinta, iyadoo muuqaalka ugu jaban ee 4K uu ku kacayo waqtigaaga Jimcaha Madow oo ah $ 267.99 (43-inji Samsung 7-taxane ah).
Waxaa jira digniin yar halkan, si kastaba ha noqotee. Waxay u badan tahay inaad ka hesho qiimo dhimis noocyada waaweyn ee
, maaddaama Amazon ay u egtahay inay ku dhegan tahay maalinteeda gaarka ah ee 'Prime Day' oo wax badan ka reeban. Waxaan aragnaa dad sida LG iyo Samsung oo kaqeyb galaya dhacdada xagaaga, laakiin aan ku qiimeyneynin wax u dhimaya bandhigyada Amazon ee dab-ku-sahlanaan karo. labada dhacdo dhexdooda, gaar ahaan bisha MayIminka oo tafaariiqleyaal aad u tiro badani ay ka boodayaan muddadii maalinta ugu horreysay ee Amazon.
Waqtiyadu waxay ka dhigan yihiin soosaariddii ugu dambeysay ee sanadka inay xoogaa qabow noqon karto qiimo dhimista Maalinta Koowaad, ka hor intaadan hoos u dhigin qiimaha xoogaa dheeraad ah ee Jimcaha Madow. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan dhib ka qabin processor-ka yar ama kor u qaadista codka, Maalinta Koowaad ayaa ugu wanaagsan moodooyinka sanadkii la soo dhaafay maadaama ay inta badan yaalaan khaanadaha bisha Nofeembar.
(Sumcada sawirka: Dell)
jimcaha madow taariikh ahaan way ugafiican tahay heshiisyada laptop-ka qiimo jaban iyo baaxad balaaran ... ... laakiin sicirka ugu hooseeya badanaa waxaa loogu talo galay kuwa aadka u tartamaya. Amazon waxay ku dhibtooneysaa qaybtaan, laakiindukaamada kale ayaa laga yaabaa inay ku jiraan boos fiican oo ay ku bixiyaan qiimo dhimis weyn sanadka 2021. Maalin, oo bixisa heshiisyo badan oo laptop ah. Iyadoo aan la helin tartankan dheeriga ah xagaaga, si kastaba ha noqotee, waxaan u muuqanaa inaan aragno heshiisyo laptop wanaagsan marka loo eego Black Friday.
Xaqiiqdii, Laptop Black Friday heshiisyada
ayaa si gaar ah caan u ah waxaadna ka heli doontaa abaalmarino aad u tiro badan oo loogu talagalay qabashada
Dhammaan waxaas la sheegay, heshiisyada halkaa ka socda sanadkii la soo dhaafay waxaa laga yaabaa inuusan noqon mid aad wakiil u ah. Cudurka faafa wuxuu si aad ah u yaraaday keydinta kombuyuutarrada gacanta ee ka jaban, tafaariiqlayaashuna aad uma aysan jecleyn inay yareeyaan iibsashada miisaaniyadda iyadoo dalabku sii kordhayo. Waxaan rajeyneynaa in dalabyo la ii soo bandhigoQiimaha qiimaha ayaa la heli karaa sanadkaan, iyadoo la siiyay in tafaariiqleyda kale ay boos fiican ka heli doonaan si ay u horumariyaan ciyaartooda xagaaga, waxaa had iyo jeer mudan in isha lagu hayo Maalmeedyada Maalinta ee Laptops
Sidoo kale, qiimayaashan jimcaha ee Black Friday oo runtii aad u hooseeya waxay u eg yihiin iibka flash-ka oo aad u gaaban. Waxaan ku aragnaa qiimo dhimis aad u kooban oo ku saabsan laptop-yada marka loo eego qalab kasta oo kale inta lagu jiro Black Friday, iyadoo heshiisyo la yaab leh mararka qaarkood lagu iibinayo daqiiqado gudahood. Tani waxay ka dhigan tahay in kastoo qiimayaashu ay si weyn hoos ugu dhici karaan bisha Nofembar, haddana fursadahaaga inaad ku iibsato heshiiska ugu fiican mashiinka aad raadineyso sidoo kale si weyn ayaa loo yareeyey. >
Qiimaha Jimcaha Madow badanaa waxay dhaafeen maalinta Amazon Prime, laakiin tartan dheeri ah waxay ka dhigan tahay inaadan sameynMa awoodi doontid inaad ku hesho heshiiska aad rabto. samaacado badan, si kastaba ha noqotee, waxay si fudud ugu noqdaan qiimahooda Maalinta Koowaad inta lagu jiro Jimcaha Madow, gaar ahaan haddii ay waxyar ka weyn yihiin oo ay ku dhufteen heerkooda qiimaha. .
Guud ahaan, waxaan aragnaa Black Friday oo bixineysa qiimo jaban dhagaha, iyadoo AirPods Pro uu garaacayo $ 189.99 bishii Nofeembar ee hore qiimaha laga soo bilaabo 199,99 $ ee Maalinta Koowaad. Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa in sameecadaha dhagaha ay u muuqdaan inay haystaan ​​qiimahooda wax badan ka dheer laptop-yada iyo TV-yada. Tani waxay ka dhigan tahay in kala duwanaanshaha sicirka ee u dhexeeya labada iibood ay aad uga hooseeyaan, sidii ku dhacday $ 10 isbeddelka ku yimid AirPods Pros. Xaqiiqdii, waxaan aragnaa sicirada si fudud ugu laabanaaya jagooyinkooda Maalinta Koowaad inta badan markaan aragno inay sii sii dhacayaan inta lagu jiro Jimcaha Madow. Tani guud ahaan waa kiiska moodooyinka duugga ah sida BoseQuietComfort II. Sameecadaha dhagaha ayaa hoos ugu dhici kara qiimo cayiman, halkaasoo tafaariiqleyda aysan ku iibin karin wax ka yar inta nooc cusub uu ka muuqanayo. tartan dheeraad ah bishii Nofeembar. Midabada ugu caansan waxay u muuqdaan inay si dhakhso leh u iibinayaan, badiyaaana maaha qiimaha hoose ee noocyada kale. Qaado Beats Solo Pro, tusaale ahaan. Sanadkii la soo dhaafay waxaan kaliya aragnay qiimaha Maalinta Koowaad inuu hoos ugu dhacay $ 199 Qiimaha ugu Fiican, laakiin Bishii Nofeembar waxaad soo qaadan kartaa labo ka mid ah $ 169 - laakiin ma ahan madow ama caddaan. Midabbadaas midabbada ah ayaa si aad ah uga dhaqso badan Black Friday iyaga oo markii ugu horraysay qiimihiisu ahaa $ 199 maalintii koowaad, iyada oo midabada hadhay, sida moodalka buluugga ah ee khafiifka ah, hoos u dhigaya qiimahooda $ 30 dheeraad ah Jaleecada hore, Black Friday waxay bixisaa qiimo kafiican dhagaha, laakinse uma badna inaad ubaahantahaysi loo helo heshiiska ugu fiican adiga maaddaama dadku ay aad u badan yihiin. Tani waxay ka dhigan tahay inaad sugto illaa Jimcaha Madow haddii aad raadineyso qiimaha ugu hooseeya ee suurtogalka ah oo aad diyaar u tahay inaad u shaqeyso, haddii kale Maalinta Koowaad waxay u badan tahay inay bixiso waqti fudud iyo qiimo dhimis la mid ah.
(Sumcada Sawirka: Fitbit)
Sannadkii hore Ilaa Oktoobar, smartwatch aad u yar heshiisyada marka la barbardhigo Maalinta Koowaad
Apple Watch Series 6 waa inay sifiican uga buuxsamaan qiimo dhimis badan marka loo barbar dhigo Maalinta Maalinta
Calaamadaha miisaaniyada oo kayar $ 100 / £ 100 waxaa laga yaabaa inay isku qiimo yihiin labada dhacdo
Sannadkii hore ee Amazon Prime Day ayaa dib loo dhigay ilaa Oktoobar, taas oo ugu dambayntii saamayn taban ku yeelatay heshiisyada casriga ee saacadaha casriga ah ee lagula tartamayo. Waa sababta oo ah SSamsung iyo Apple labaduba waxay bilaabeen jiilkooda xiga ee jimicsiga jirdhiska toddobaadyo kahor taariikhda daahitaanka. Xaaladda Apple, taasi waxay ka dhigan tahay qiimo-dhimis aad u yar oo ku saabsan SE ama Taxanaha 6, iyo keyd la'aan ku saabsan taxanahii hore ee 5. Si kastaba ha noqotee, illaa Black Friday moodooyinkan waxay lahaayeen waqti in ay ku bislaadaan, haddii kaliya bil ama wax la mid ah, waxaanan aakhirkii aragnay $ 40 qiimo dhimis ah oo ku saabsan Taxanaha 6 ee garaacaya Prime Day Apple Watch Deals . Iyadoo tani qalloocineyso fahamkeenna ku saabsan waxa la iibsanayo marka sannadkan, kuwa seegay heshiisyadii smartwatch ee sannadka 2020 waxay u badan tahay in lagu abaalmarin doono heshiisyo miiska saaran 2021. , taasna waxay ka dhigan tahay jiilkii sanadkii hore inay si fiican u jaangooyaan qiimo dhimis dheeraad ah. Haddii dhaqanka sanadlaha ah uu run noqdo, Apple wuxuu bilaabi doonaa taxanahiisa 7 bisha Sebtember. Haddii aad raadineyso taxanaha 6, markaa saamiga ayaa laga yaabaa inuu noqdont oo la iibiyay waqtiga jimcaha Black Friday, taas oo macnaheedu yahay Maalinta Maalinta ayaa raadin doonta inay sameyso ficil si ay macaamiisha ugu soo jiito keydkeeda hadda jira inta ay tahay. weli waa jiraa. Si kastaba ha noqotee, taxanaha 7 wuxuu yeelan doonaa bilo yar oo ka mid ah khaanadaha u horseedaya Black Friday oo waxay u badan tahay inuu heli doono qiimo dhimis la mid ah tii sanadkii hore ee taxanaha 6. jadwalka sii deynta, laakiin laga yaabee inuusan ahayn sanad kasta sida Apple, laakiin noocyada sida Garmin, Fitbit, iyo Samsung uma muuqdaan inay jiilkooda ka sii fogeeyaan khaanadaha si deg deg ah. Tani waxay ka dhigan tahay inaad ka heli karto qiimo aad u hooseeya nooc kasta oo la beddelay bilooyinkii u horreeyay Black Friday, waxaanan aragnaa aaladaha Fitbit iyo Garmin oo si gaar ah u bixinaya qiimo hoose bisha Nofeembar.
Dhamaadka miisaaniyadda, si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale iibsan kartaa mid cusub.e smartwatch bisha Juun. Mar alla markii qiimaha bilaabmo inuu ku dhufto $ 120 / £ 120 sicirka dhimista ayaa aad uga hooseeya wax badanna ma keydin doontid bisha Nofembar.
Ipadyada iyo kiniiniyada Samsung Galaxy si dhaqso ah ayey u iibiyaan inta lagu jiro labada dhacdoba, laakiin waxaad ka nasiib fiicantahay maalinta koowaad. gen iPad iyo Samsung Galaxy Tab S7 lagama yaabo inay sii dheeraadaan nooc cusub oo kaniini ah, taas oo macnaheedu yahay in qiimayaashu ka fiicnaan doonaan marka la barbar dhigo Maalinta Maalinta. Maalinta Jimcaha ee Madow waxay leedahay dukaamo badan oo tafaariiq ah, taas oo macnaheedu yahay waxaad ka heli kartaa aalado duug ah oo wali iib ah, oo laga yaabo in lagu soo kordhiyo qalabyo dheeri ah. ka badan kuwii Jimcihii Madoobaa, laakiin ma yeelaynoMa fileyno hoos u dhac qiimo leh.
Kiniiniyada ugu fiican sida iPad-ka iyo safka Samsung Galaxy Tab ayaa si dhaqso leh u iibiya labada maalin ee Amazon Prime Day iyo Black Friday, in kastoo aad u badan tahay inaad sidaas u samee iibka xagaaga. Tartan yar iyo iib yar oo filasha ah oo wajihi kara ayaa la micno ah inaad awood u yeelan doonto inaad ka adkaato dadka wax yar ka fudud bisha Juun.
Intaa waxaa dheer, waxaan ogaanay in qiimaha alaabada tikidhada waa weyn sida iPad Pro ay isku mid yihiin labada bartilmaameed
Prime Day Deals on iPad
iyo iPad Black Deals Friday ($ 749 ee 11-inch, ama $ 799, iyo $ 949 oo loogu talagalay 12.9-inch, ama $ 999) - in kasta oo ay tahay in la ogaado in tani ay ahayd markii ay dhacday Maalinta Koowaad Oktoobar sidaas darteedna ay aad ugu dhowdahay Taariikhda Nofeembar ee Jimcaha Madow.
Jimcaha Madow ayaa leh tafaariiqlayaal ciyaarta dheeri ah, oo qaarkood laga yaabo inay leeyihiin keydad moodooyin duug ah oo qiimahoodu aad u hooseeyo isla markaana, aan awoodin inay bqiimo dhimista dukaanka waaxda moodooyinka cusub, ku soo bandhig qalabyo xirmooyin ka yar sida wanaagsan. Tani waa wixii dhacay Jimcihii Madoobaa ee sanadkii hore, iyadoo B&H Photo ay bixinayaan 2018 12.9-inch 256GB oo ah taleefanka gacanta ee loo yaqaan 'iPad Pro' oo wata kumbuyuutar sixirkiisu yahay $ 1,249, marka loo eego $ 1,648. Haddii aadan ka walwalsanayn casriyayntii ugu dambeysay, tani waxay ahayd dalab soo jiidasho leh oo aan jirin intii lagu jiray Maalintii Koowaad.
Markay tahay bixinta Samsung, taariikhihii Oktoobar ee sanadkii hore waxay la micno tahay S7 iyo S7 Plus diyaar uma ahan qiimo dhimis waxayna waxbadan ka fiicnaadeen marka loo barbar dhigo Black Friday sida ku cad. Sanadka 2021, hase yeeshe, kiniiniyadani waxay si qumman u wajihi doonaan qaar ka mid ah qiimo dhimista Maalinta Koowaad ka hor moodooyinka cusub ee bisha Sebtembar / Oktoobar - sii deynta cusub ee aan qaangaarin ku filnayn inay ku siiso isla heerka keydinta ee Black Friday. Haddii aad raadineyso jiilka 8aad ee iPad ama Samsung Galaxy Tab S7, waxaan kugula talineynaa inaad ku booddo heshiisyada bisha ee bishaan. IPad Pro waxay rajeyneysaa qiime kafiican marka loo barbardhigo Black Friday, ama xirmo qaab duug ah, laakiin uma jeedno inaan ku aragno qiimo dhimis aaladahaan ah ilaa la siidaayo Jiil cusub, marka keyd dheeri ah oo dheeri ah bisha Nofeembar ayaa ugu yaraan noqon kara.
Beats Studio Buds vs Apple AirPods Pro: buuqa baajiya dhagaha maqalka marka la barbar dhigo
2021-06-16 08:03:17 | Cusub
The Beats Studio Buds ayaa ugu dambayntii la joogaa, ka dib toddobaadyo xatooyo heer sare ah iyo warar xan ah - waxayna noqon karaan dhagaha dhagaha ugu fiican. waxqabadkooda ka hor intaan la sameyn tijaabooyin dheeri ah, aad ayaan ula dhacsanahay Studio Buds ilaa iyo haatan - aad ayey u fiican yihi...
Hordhac u ah guryaha bilicsanaanta ee metaverse
2021-06-16 08:01:20 | Cusub
Hordhac ku saabsan Hantida Guryaha ee Metaverse Kuwa adeegsada lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies': gamers, barnaamijyada, naqshadeeyayaasha, farshaxan-yahannada, iyo maal-gashadayaasha - waxay u jeesteen dhulal dalxiis ah. Kuwa ugu caansan waa Decentraland, Cryptovoxels, Axie Infinity, Enjin, So...
Laptobyada ardayda ugufiican 2021: dhamaan xulashooyinka ugufiican dugsiga
2021-06-16 07:59:39 | Cusub
Markaad dooranayso laptops-ka ardayda ugu fiican, waxaa jira waxyaabo yar oo maskaxda lagu hayo. Si kastaba ha noqotee, kaliya ma iibsan kartid mashiinka ugu casrisan ee jira, caqabadaha miisaaniyadda awgood, laakiin sidoo kale ma aadi kartid laptop yar oo raqiis ah oo aad ka heli karto maxaa yeelay...
Vpns for netflix: faa'iidooyinka iyo astaamaha lagama maarmaanka ah
2021-06-16 07:56:43 | Cusub
VPN loogu talagalay Netflix: Faa'iidooyinka iyo Waajibaadka Astaamaha Yaan jeclayn Netflix? Adeeggu wuxuu martigeliyaa tan oo filim iyo taxane ah dhammaan dhagaystayaasha iyo da 'kasta. Netflix sidoo kale waxay abuureysaa nuxur u gaar ah, oo ka bilaabmay The House of Cards oo la sii daayay 2013, san...
Sida loo dhiso loona howlgeliyo nlp moodal fastapi: qeybta 2
2021-06-16 07:50:14 | Cusub
Sida loo Abuuro loona Dhigo NLP Model leh FastAPI: Qaybta 2 Tani waa qaybtii labaad ee ugu dambaysay silsiladda taxanaha ah ee ku saabsan sida loo abuuro loona geeyo NLP Model-ka FastAPI. Qeybtii 1aad, waxaan eegnay sida loo dhiso NLP nuuca u kala saari kara dib u eegista filimka dareeno kala duwan ...
Hungary vs Portugal live stream: sida loo daawado ciyaarta Euro 2020 oo bilaash ah iyo meel kasta oo haatan la joogo
2021-06-16 07:46:27 | Cusub
Kooxda heysata horyaalnimada Yurub ayaa maanta u cibaadeysaneysa Euro 2020, iyadoo Cristiano Ronaldo iyo saaxiibbadiis ay aadayaan Budapest furitaanka kulankan oo loogu magac daray Group of Death Championships. Ciyaarta Euro 2020 Group F meel kasta ha ahaato Hungary vs Portugal Euro 2020 live Taarii...
#mystartintech: wareysi lala yeeshay laura fernández, allwomen.tech
2021-06-16 07:41:58 | Cusub
#MyStartInTech: Wareysiga Laura Fernández, allWomen. Tech Shaqaalaha teknolojiyadda ee Mareykanka kuma korayaan heerka ugu fiican. Tirada iskuulada bixiya IT-ga kuma filna taas oo saameyn ku leh helitaanka IT-ga ee haweenka da'da yar iyo ardayda ka soo jeeda beelaha la hayb sooco runta ayaa ah inay ...
Heshiiskan cajiibka ah ee 13-inch ah ee MacBook Pro waa qiimaha ugu hooseeya ee Amazon
2021-06-16 07:40:18 | Cusub
Iyadoo Amazon Prime Day 2021 wax yar uun laga joogo geeska, waxaan bilaabaynaa inaan aragno heshiisyo runtii aad u wanaagsan oo soo socda. Taasi waa war weyn oo loogu talagalay taageerayaasha Apple ee 13-inch MacBook Pro (M1, 2020), oo leh nooca 512GB oo hadda loo heli karo $ 1,300 cajiib ah (wuxuu ...
Qolka Linux ee horumarsan oo leh astaamo AI ku shaqeeya
2021-06-16 07:35:33 | Cusub
Advanced Linux Shell oo leh astaamo AI-ku saleysan Meel nolosheena ka mid ah, waxaan ku riyoonay inaan yeelano caawiye AI nafteena oo dejin kara xiisaha aan u qabno, ka jawaabi karno dhamaan su'aalaheena, ama sameyn karno waxyaabahayaga. Filimkii Iron Man Dhawaan barnaamij (River) wuxuu abuuray qolo...
Heshiiska maanta ee ugu wanaagsan ee Maalinta Koowaad wuxuu kaa dhigayaa 50% boqolkiiba Echo Dot kii ugu dambeeyay
2021-06-16 07:32:42 | Cusub
Amazon ayaa hadda hoos u dhigtay heshiisyo maalmeed maalmeedyo fantastik ah, oo kuwa aan jecel nahay ee farabadan ayaa ku jira iibinta 'Echo Dot' Waqti xaddidan, xubnaha Ra'iisul-wasaaraha waxay ku iibsan karaan laba Echo Dots qiimaha hal markii aad ka dalbaneyso lambarka xayeysiinta PDDOT2PACK goob...
Wanaagga iyo xumaanta ku saabsan dharka fiber optic
2021-06-16 07:30:32 | Cusub
Wanaagga iyo xumaanta ku saabsan dharka fiber optic Image via wearabletutorials Naqshadayaashu waxay had iyo jeer raadinayaan inay abuuraan qaybo xiiso leh oo firfircoon si loogu daro ururintooda. Waxay u socotaa iyada oo aan la sheegin in marka ay timaado moodada, naqshadeynta hal-abuurka ahi ay mu...
Diamond Pokémon iyo Pearl Remakes Taariikhda Soo Saarida, Trailer, News & More
2021-06-16 07:22:50 | Cusub
Dib-u-habeynta Pokémon Diamond iyo Pearl ayaa la filayaa in la sii daayo dhammaadka 2021 iyada oo loo marayo cinwaannada cusub ee Pokémon Brilliant Diamond iyo Pokémon Shining Pearl. Ciyaaraha soo socda waa qeybtii afaraad ee saf dheer oo ah Pokémon reakes, ka dib Pokémon FireRed iyo LeafGreen (2004...
Casharrada buug-yaraha ee jupyter-ka ah iyadoo la adeegsanayo sdk modzy python
2021-06-16 07:09:40 | Cusub
Sida loo jabsado roblox oo ay tahay inaad sameyso?
2021-06-16 06:58:51 | Cusub
Sida loo jabsado Roblox oo aad u sameyso Roblox wuxuu noqon karaa madadaalo badan oo leh tiro aan dhammaad lahayn oo ciyaaro ah oo la isku dayo, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa mid caajis badan. Had iyo jeer waxyaabo badan ayaa ka dambeeya Robux, ciyaaraha qaarkood cadaalad daro ma tahay runti...
Evil Dead: trailer ciyaarta, makaanikada ciyaarta iyo sawirro cusub
2021-06-16 06:54:15 | Cusub
Xun xun: The Trailer Gameplay, Mechanics Gameplay, iyo Sawirro Cusub Ash Williams, oo ah geesiga boomstick-ka ah ee 'Evil Dead franchise', ayaa ku soo laabtay ciyaar fiidiyoow cusub oo ka socota Ciyaaraha Kooxda Boss. Xayeysiin cusub ayaa loo soo daayay ciyaarta toddobaadkan, oo soo bandhigtay horud...